च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल ड्र : बार्सिलोना र म्यान युनाइटेड तथा युभेन्ट्स र आयाक्स भिड्ने
लन्डन- युरोपियन फुटबल महासंघले युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलको ड्र सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार गरिएको ड्रअनुसार अन्तिम-८ मा स्पेनिस महारथी बार्सिलोनाले इङ्लिस क्लब म्यान युनाइटेड तथा इटा...
युरोपा लिगको प्रि–क्वाटरफाइनल समीकरण पूरा
एजेन्सी । युरोपा लिग फुटबलको प्रि–क्वाटरफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । बिहिबार राति प्रि–क्वाटरफाइनलका सम्पूर्ण खेलहरु सकिएसँगै क्वाटरफाइनलमा विभिन्न क्लबले स्थान बनाएका छन् । युरोपा लिगको अन्तिम आठम...
च्याम्पियन्स लिग : क्वार्टरफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टोली ‘हेड टु हेड’ को बलियो ?
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिग क्वार्टरफाइनलअन्तर्गत बार्सिलोनाले म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। शुक्रबार सार्वजनिक भएको ड्र अनुसार बार्सिलोनाले क्वार्टरफाइनलमा युनाइटेडलाई प्रतिद्...
काठमाडौँ । जारी सिजनको युरोपा लिगको क्वाटरफाइनलमा पुग्ने टिमको टुंगो लागेको छ । बिहीबार राति सम्पन्न खेलसँगै क्वाटरफाइनलमा पुग्ने टिमको टुंगो लागेको हो । क्वाटरफाइनलमा दुई इंग्लिस टिम चेल्सी र आर्स...
च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल ड्र ‘लिक’, बार्सिलोनाको प्रतिद्धन्द्धी म्यान्चेस्टर सिटी !
एजेन्सी । आज च्याम्पियन्स लिगको ‘क्वाटरफाइनल ड्र’ सार्वजनिक हुँदैछ तर, बिहीबार बेलुकादेखि उक्त ड्र ‘लिक’ कुरा सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । युइएफएका निर्देशक विलियाम जियालार्डले ड्रको फोटो सार्वजन...
च्याम्पियन्स लिग : बार्सिलोना र म्यानचेष्टर युनाइटेड भिड्ने
१ चैत, काठमाडौं । च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा बार्सिलोना र म्यानचेष्टर युनाइटेड भिड्ने भएका छन् । शुक्रबार भएको ड्रमा ला लिगा लिडर बार्सिलोनाले युनाइटेड प्रतिद्वन्द्वी पाएको थियो । यसअघि २...